China DAM1 Series Thermal Overload Mashandiro Akaumbwa Nyaya Yakagadzirwa Nedunhu (Yakagadziriswa mhando) fekitori uye vagadziri | DaDa
DAM1 Series Thermal Overload Mashandiro Akaumbwa Nyaya Yakagadzirwa Nedunhu (Yakagadziriswa mhando)
Thermal-Magnetic Dunhu Anopwanya
Thermal kuchengetedza basa: (Kudzivirirwa pasi pemamiriro ekuremerwa)
Bimetal, iyo inopa kupisa kwekudziya, inosanganisira kusanganiswa kwesimbi mbiri dzakasiyana dzekuwedzera coefficients pasi pekupisa. Kana bimetal ropisa, rinokotama rakananga simbi nekuwedzera kuwedzerwa. Nenzira iyi, notch inobatsira kuvhurika kweanotyora michina inosunungurwa kuremadza iyo inotyora. Kukotamisa kumhanya kwe bimetal kuri muchikamu chakanangana nehukuru hwazvino kupfuura nepabreak. Nekuti, kuwedzera kwezvazvino zvinoreva kuwedzera kwekupisa. Nenzira iyi, pamusoro pazvino dziviriro basa reiyo breaker inozadzikiswa ne bimetal pamutoro mafungu akakwirira kupfuura akaverengerwa azvino
Magnetic chengetedzo basa (Yekudzivirira pasi pemamiriro mafupi wedunhu)
Rimwe basa remubhureki ndere kuchengetedza dunhu rakabatana kubva kumatunhu mapfupi. Ipfupi redunhu inogona kuitika semhedzisiro yekusangana kwezvikamu nechero imwe kana kuonana kwechikamu-pasi. Sezvo yakakwira kwazvo yazvino ichapfuura nemumatambo kana iri pfupi dunhu, simba remagetsi rinofanira kutyorwa munguva ipfupi nekuda kwekudzivirirwa kwemafuta. Anotyora anofanira kuvhura chiriporipocho kuchengetedza mutoro wakabatana nawo. Chikamu chinozadzisa iri basa inzira yekuvhura michina iyo inoshanda nemagineti inokonzerwa nemagineti
nharaunda yakaumbwa nepfupi redunhu razvino
• Kuzvimiririra kuzvimiririra kumisikidza zvishandiso zvekubatsira:
Pasi pemagetsi kuburitswa;
Bata mashandiro ekushandisa;
Electrical mashandiro mashandiro;
• Yakajairwa seti yega yega redunhu breaker ine inosanganisa mabharanzi kana tambo tambo, maparadzanisa echikamu, seti yezvipenga uye nzungu zvekukwira kwayo pane yekuisa pani.
• Uchibatsirwa neyakakosha simbi 125 uye 160 zviyero zvinogona kuiswa pane DIN-njanji.
Kurema uye hupamhi hweanopwanya wedunhu ne10-20% pasi peizvo zvinoratidzwa nevamwe vagadziri vemusha. Izvi zvinopa kumisikidza mabhokisi madiki uye mapaneru. Kunze kwezvo, zvidiki zvidiki zvinoita kuti zvikwanise kushandura makare mabreak breaker kuenda kuDAM1.
Yakaumbwa kesi wedunhu mabhureki akadzika-magetsi wedunhu mabhureki. Ivo vanosangana nezvinodiwa zvekumisikidza zvevashandisi vadiki nzira yese kune makuru maindasitiri anotsiva uye masimba ekuparadzira masimba Iwo anowanzo shandiswa muzvigayo zvesimbi, mapuratifomu emafuta, zvipatara, zviteshi zvechitima, nhandare dzendege, nzvimbo dzemakomputa, zvivakwa zvehofisi, nzvimbo dzemusangano, nzvimbo dzemitambo, masikiriti, uye zvimwe zvivakwa zvakakura.
Magetsi Parameter YeDAM1 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Breaker
Thermal-magnetic yakatarwa mhando MCCB
• Icu:Ot-CO bvunzo (O: Vhura manejimendi, CO: Pedyo-Vhura maneja, t: Kumirira nguva)
• Zviratidzo:Ot-CO-t-CO bvunzo (O: open maneuver, CO: Pedyo-Vhura manejimendi, t: Kumirira nguva)
ON / I Position: Inotaridza kuti vanobatana neanotyora avharwa. Mune ino nzvimbo, lever yekutyora iri munzvimbo yepamusoro
CHITATU Chinzvimbo: Zvinotaridza kuti mudariki unovhurwa nekuda kwekukanganisa (pamusoro pemutoro kana pfupi dunhu). Mune ino kesi, breaker lever iri munzvimbo yepakati pakati ON uye OFF nzvimbo. Kuti utore iyo inotyoka, iri munzvimbo yerwendo, kune ON chinzvimbo; Pusha iyo breaker lever pasi sezvakaratidzwa neOX chiratidzo
Breaker ichaiswa ne "tinya" kurira Mushure meizvozvo, dhonza lever sezvakaratidzwa neOO chiratidzo kuti uvhare iyo inotyoka.
OFF / 0 Chinzvimbo: Inotaridza kuti vanobatika kweanotyora avhurika. Nenzira iyi, iyo breaker lever iri munzvimbo yepazasi.
Paramende Parameta YeDAM1-125 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Breaker
Chikamu (EN 60947-2 / IEC 60947-2)
kusurukirwa kure (mm)
Kukura kweMCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
Pashure: DAM1 Series Thermal Uye Magnetic Adjustable Type Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Remagetsi (MCCB)
Zvadaro: DAM3-160 MCCB Yakaumbwa Nyaya Yedunhu Rinotyora
4 Pole Mccb Dunhu Remake
DAM1 Series Electronic Type Yakaumbwa Nyaya Circui ...
DAM1 Series Thermal Uye Magnetic Adjustable Type ...